दशैको अवसरमा आयो आकर्षक पल्सर बाइक ! मुल्य सुन्दा सबै चकित ! – Nepali in Australia
October 19, 2020 EditorLeaveaComment on दशैको अवसरमा आयो आकर्षक पल्सर बाइक ! मुल्य सुन्दा सबै चकित !
खुसिको खबर – दशैंको अफरमा आयो अहिलेसम्मकै सस्तो मुल्यको पल्सर बाइक ! बजाज मोटरसाइकलको लागि नेपालका लागि आधिकारिक वितरक हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले आजबाट चाडपर्व लक्षित ग्राहक योजना सार्वजनिक गरेको छ ।